Ndingayibuyisela njani imiyalezo yeTelegram - VidaBytes | LifeBytes
Ndingayibuyisela njani imiyalezo yeTelegram
Iris Gamen | 13/06/2022 20:17 | Izicelo
Ndiqinisekile ukuba ikhe yenzeka kuwe Uyitshintshile ifowuni yakho, awuzange ube ne-backup kwaye uphulukene neencoko zeTelegram yakho kuphela, kodwa zonke iifayile. waba nesabelo kuzo. Ngamaxesha amaninzi, asiyiniki eyona nto ibalulekileyo, kodwa xa ezi ncoko zibandakanya umsebenzi okanye idatha yobuqu okanye amaxwebhu, izinto ziba nzima.
Ungakhathazeki, sikhona ukukunceda kule ngxaki. Siza kukunika uthotho lwamanyathelo kunye Iingcebiso onokuzilandela ukuze ufumane kwakhona imiyalezo kwiakhawunti yakho yeTelegram, kunye nedatha ebalulekileyo kunye namaxwebhu.
Ukuba, kwelinye icala, nguwe ocima iincoko zomntu ngamnye kwisicelo ngasinye kwaye ngoku ufuna ukuzifumana, uya kukwazi ukwenza njalo. ITelegram, ikunika ithuba lokucima ngokusisigxina imiyalezo okanye iimbali zokuncokola ngaphandle kokushiya umkhondo. Nale miyalezo siyikhethile ukuyicima uya kukwazi ukuyibuyisela. Hlala kwaye siza kuchaza ukuba njani.
1 Yintoni isicelo seTelegram?
2 Uyibuyisela njani imiyalezo yeTelegram
2.1 hlehlisa iqhosha
2.2 Imiyalezo egcinwe kwiTelegram
2.3 Jonga i-cache yesixhobo sakho
3 Uyigcina njani iTelegram
Yintoni isicelo seTelegram?
ITelegram, yi usetyenziso lomyalezo olukhawulezileyo olukhoyo kwizixhobo ezahlukeneyo njengeWindows, MacOs kunye neLinux, ngaphandle kokulibala i-Android kunye ne-IOS. Ifumaneka ngokwenyani kuzo zonke izixhobo esizisebenzisayo kwimihla ngemihla. Kukho abo bathelekisa esi sicelo kunye ne-WhatsApp, ngenxa yokufana kwayo kwaye banenjongo efanayo.
Yintoni eyahlula enye kwenye kukuba iTelegram ayifuni isixhobo esiphathwayo ekusebenzeni kwayo. Enkosi koku, imfihlo yabo bonke abasebenzisi bayo ilawulwa kakhulu. Kwakhona, ingongoma entle kukuba ulwazi olwabelwana ngalo kwiincoko lugcinwe kwiiseva zeTelegram kwaye hayi kwisixhobo.
Uyibuyisela njani imiyalezo yeTelegram
Kweli candelo apho uzifumana khona, uya kuba nakho ukufumana iinkqubo ezahlukeneyo oya kuba nakho buyisela iincoko kunye neefayile zeTelegram ezicinyiweyo okanye ezilahlekileyo.
Usetyenziso lweTelegram, ikuvumela ukuba uhlehlise into oyicimileyo, ngabom okanye ngokungeyonjongo. Gcina ukhumbula ukuba kufuneka wenze le nkqubo ngexesha elifutshane kunokwenzeka xa ucime imiyalezo kwincoko.
Xa usenza isigqibo ukucima ingxoxo ngokupheleleyo, uya kubona a ukhetho olunokwenzeka lokuhlehlisa eso senzo kwimizuzwana embalwa. Ukuba ucinezela kwelo qhosha lokuhlehlisa, uya kuba nakho ukubuyisela yonke into ngemizuzwana, imiyalezo kunye neefayile ngaphandle kwengxaki.
Unokwenza le nkqubo kuphela kweso sithuba sexesha apho isicelo sibonisa ukuba uthe kunokwenzeka ezantsi kwesikrini, unexesha eliqikelelweyo malunga nemizuzwana emi-5.
Kwimeko apho ucima umyalezo kwincoko yomntu, uya kuba nesisombululo esincinci. Kuyo nayiphi na imeko, xa ulungele ukususa into kwisicelo, oku izakubuza amaxesha amaninzi ukuba ngenene ufuna ukucima umxholo onje, ukuba kunjalo, kufuneka wamkele kwaye ulinde ukuba isuswe.
Imiyalezo egcinwe kwiTelegram
Ngokuqinisekileyo, ngaphezu kwesinye isihlandlo uye wagcina imiyalezo ngaphandle kokuqonda. Le app yomyalezo, Inefolda eyakhelwe-ngaphakathi apho imiyalezo oyigcinileyo igcinwa kwaye onokuyisebenzisa nangaliphi na ixesha.
Abasebenzisi abaninzi beTelegram abazi malunga nale folda iyimfihlo kwaye bakholelwa ukuba baphulukene nemiyalezo yabo. Akukho mfuneko yakukhathazeka kwakhona, loo miyalezo ayilahlekanga, kodwa zigciniwe kwaye uya kuba nakho ukuzifumana, ngoku siyakuxelela indlela onokuzibuyisela ngayo.
Ukuze ufikelele kuzo, kufuneka uvule usetyenziso lomyalezo. Okulandelayo, yiya phezulu ekhohlo kwesikrini, apho uya kungena kwiprofayile yakho yefestile. Emva koko ukhethe igama lakho kunye nenombolo, jonga igama lakho lomsebenzisi kwi-app. Kwi i icon yeglasi ekhulisayo evela kwiscreen sencoko, bhala igama lomsebenzisi kwaye ngokuzenzekelayo, iTelegram, ikubonisa ifolda yemiyalezo egciniweyo.
Jonga i-cache yesixhobo sakho
Kwimeko apho ulahlekelwe okanye ucime ifayile, nokuba yimultimedia okanye isicatshulwa, kwaye ufuna ukuyibuyisela, kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo. Okokuqala, kuya kufuneka uye kumphathi wefayile wesixhobo sakho esiphathwayo. Jonga ifolda phantsi kwegama lesixhobo sakho, ukuba yiAndroid, incwadi eneenkcukacha iya kuba negama elifanayo.
Nje ukuba ifunyenwe, yikhethe, yifikelele kunye nomxholo wayo. Ngaphakathi, unokufumana iifolda ezahlukeneyo apho yonke i-cache yezicelo ezifakwe kwizixhobo zakho zigcinwa. Fumana ifolda phantsi kwegama leTelegram, kwaye ufikelele kuzo zonke iifayile ekwabelwana ngazo kwisicelo kwaye ufumane leyo uyicimileyo ngempazamo.
Uyigcina njani iTelegram
Le nkqubo yokulondoloza yahlukile koko siqhele ukukubona kuWhatsApp. Isicelo seTelegram sine-a isixhobo esiya kusivumela ukuba sigcine yonke idatha yeencoko zethu kwikhompyuter yethu.
Ukwazi ukuthumela ngaphandle iincoko esizivulileyo kwiTelegram kwiPC, into yokuqala omawuyazi kukuba kufuneka ube nayo. ifake usetyenziso kwidesktop yesixhobo. Nje ukuba uyifakile, unayo kuphela ngena ngenombolo yakho yeselula kwaye ufake ikhowudi ethunyelwe kwesinye sezixhobo zakho, ngesiqhelo iselfowuni.
Xa uvula usetyenziso kwikhompyuter yakho, uya kunqakraza kwi menu evelayo kwindawo ephezulu ekhohlo kwesikrini, eyaziwa ngokuba yimenyu ye-hamburger. Nje ukuba ucofe, imenyu iyaboniswa kwaye uya kukhangela ukhetho lweseto.
Xa ucofa useto, kuvela iwindow ephumayo eneendlela ezahlukeneyo zokukhetha. Phakathi kwazo zonke ezo zikhetho, kufuneka ukhethe ephambili. Kwakhona, isikrini esitsha siya kuvula apho kufuneka ukhethe "Thumela ngaphandle idatha kwiTelegram", ngaphakathi kwecandelo "Idatha kunye nokugcinwa".
Njengoko ngamanye amaxesha kwenzeka xa usenza i-backup, Kuya kufuneka ulumkele zonke iinketho ozinikwayo., kuba kuxhomekeke ekubeni ukhetha enye okanye enye, le kopi iya kuba ngaphezulu okanye ngaphantsi epheleleyo.
Njengoko ubona emfanekisweni, kukho iindlela ezahlukeneyo zokugcina, kuphela iingxoxo zabucala okanye zobuqu, amaqela abucala okanye kawonke-wonke, ubungakanani befayile, njl. Xa unayo yonke into kwaye ikopi igqityiwe, zonke iifayile ziya kugcinwa kwifolda yokukhuphela phantsi kwegama elithi "Desktop yeTelegram".
Khumbula ukuba ukuba akukho backup, awuyi kukwazi ukubuyisela iincoko, okanye imiyalezo ecinyiweyo okanye iifayile zemultimedia. Siyathemba ukuba ezi ngcebiso zisisiseko malunga nendlela yokubuyisela imiyalezo yeTelegram ziya kukunceda. Ukuba nangaliphi na ixesha naliphi na ityala elinyangwayo lenzeka kuwe, sele uyayazi indlela yokwenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubomi beByte » Izicelo » Ndingayibuyisela njani imiyalezo yeTelegram
Iinkqubo zokuguqula iifoto zibe ziividiyo
Eyona Bhothi yoMculo yeDiscord